Mampiharihary Ny Fankahalàna Vahiny Ananan’ireo Japoney ny Firotsahana Feno Fanantenan’ilay Japoney-Taioanezy Ho Mpitarika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Septambra 2016 12:03 GMT
Renho, kandidà ho mpitarika ny Antoko Demokratika (Japana). Sary avy amin'ny fantsona Youtube ofisialin'ny FCCJ .
Noho ny firazanany Taioanezy, niantefan'ny kiana ilay vehivavy Japoney mpanao politika, ary nampangaina ho mpankahala Japoney. Izany rehetra izany dia ao anatin'ny hetsika fanentanana mba hampifamatorana ilay mpanolotra be herin-tsaina fahiny tao amin'ny fahitalavitra amin'ny fotoana maizina indrindra tao amin'ny tantara Japoney vao haingana.
Renho Murata, mpanohitra malaza izay fantatra fotsiny amin'ny ankapobeny amin'ny hoe ”Renho,” dia mifaninana ho mpitarika ny Antoko Demoktratika noforonina vao haingana (民進党, Minshinto, na ‘DP’) antoko mpanohitra lehibe indrindra ao Japàna, izay hifidy ny filohany amin'ny 15 Septambra.
Na avy any Taiwan aza ny rainy, i Renho dia teraka ary nitombo tao Tokyo ary nitazona ny zom-pirenena roa teo amin'ny Japàna sy Taiwan hatramin'ny, fara fahakeliny hatreto amin'ny faha-17 taonany.
Nanohy ny maha-mpanolotra vaovao azy i Renho tamin'ny taona 1990, indraindray mitatitra momba ny ao Shina. Voafidy ho mpikambana tao amin'ny Antenimieran'i Japàna tamin'ny 2004, nanao ny tetezamita ho an'ny ministera iray tao anatin'ilay governemanta osan'ny Antoko Demaokratika tao Japàna (民衆党, Minshuto, fantatra ho ny ‘DPJ’ ary efa maty ankehitriny) izay noforonina tamin'ny 2010.
Raha miomana ny hifidy mpitarika vaovao amin'ny 15 Septambra ilay Antoko Demokratika (DP) vao noforonina, ireo mpanohitra ara-politika kosa miezaka ny hampifandray an'i Renho amin'ilay Antoko Demokratika faran'izay halan'ny olona ao Japàna ary miampanga azy ho mbola manohy ny fitazonana miafina ireo zom-pirenena roa, izay voararan'ny lalàna Japoney.
Ity ny fandrakofana ny olana iray avy amin'ny gazety ambony fiaramanidina an'ny zotram-piaramanidina Shinoa anatiny tamin'ny volana Aogositra 2010. Misy lahatsoratra iray manontany hoe ”Mety ho i Renho no ho lasa Praiminisitra manaraka ao Japana ?” Miteny ihany koa ilay lahatsoratra fa tsy nanary ny zom-pirenena maha-Taioanezy-Japoney azy izy.
Tsy manampy ny nanambaràn'i Renho tenany fa nandefa antontan-taratasy ho an'ilay toy ny Masoivoho Taioanezy ao Tokyo ny tenany mba hanamarina indray mandeha sy ho an'ny rehetra fa tsy mitazona ny zom-pirenena roa intsony izy.
Ho an'ireo mpanakiana an'i Renho, ny resaka momba ny zom-pireneny dia nanome azy ireo fahafahana mamirapiratra mba hanontany ny momba ny fiombonany amin'i Japana. Noho ny fomba fijery feno fihantsiana vao haingana nataon'ilay tena tia tanindrazana Abiru Rui izay nozarain'ny Sankei Shimbun, ilay gazety mpiseho isanandro manana fironana amin'ny fifikirana amin'ny nentin-drazana, ny teny hoe ”mandà” sy ”mitàna amin'ny tsy misy dikany” (否定・軽視) dia nironana be tao amin'ny Twitter tamin'ity herinandro ity.
“‘Resaka Mazava avy amin'i Abiru Rui” — Amin'ny Fitsipahana sy Fitànana ny Fotokevitry ny ”Firenena” Amin'ny Fanamavoana, Mbola Mikoriana Mafy ny ‘ADN’ avy amin'ny Antoko Demoktratika taloha.”
Sarin'ny tsy fahombiazana, tsy fahaizana, ary famadihana tanindrazana sy fanavakavaham-bolonkoditra mihitsy aza
Mitondra lohateny mavesatra ilay fanehoankevitra kely mampifanditra an'i Abiru ”Amin'ny Fitsipahana sy Fitànanana ny Fotokevitry ny ”Firenena” Amin'ny Fanamavoana, Mbola Mikoriana Mafy ny ‘ADN’ avy amin'ny Antoko Demoktratika taloha,” (‘国’ を否定・軽視する民進党には、やっぱり民主党ＤＮＡが色濃く流れている).
Lazain'i Abiru fa hataon'ilay Antokom-panoherana Demokratika vao noforonina vao haingana (民進党, Minshinto) ho farahidiny mandrakariva ny tombontsoan'i Japana, toy Antoko Demokratikan'i Japana nodimbiasany (民衆党, Minshuuto) nanao antsirambina an'i Japana nandritra ny fotoana naha-tao amin'ny birao azy, 2009 ka hatramin'ny 2012.
Teo amin'ny fitondrana nandritra ny volana Martsa 2011 “Lozabe Telo” talohan'ny nisorohana azy tamin'ny fifidianana solombavambahoaka tamin'ny 2012, mamoaka sarinà tsy fahombiazana, tsy fahaizana, ary famadihana tanindrazana mihitsy aza ny Antoko Demoktratika Japoney (DPJ) ary ny tena fahasimbàn'i Japana tenany, noho ny loza mahatsiravina tao Fukushima na ny ady nifanaovana tamin'i Shina.
Tsy niverina nahazo ny fon'ny vahoaka intsony ny Antoko Demokratikan'i Japana taorian'ny fifidianana tamin'ny 2012, ary noravàna tamin'ny Martsa 2016. Noforonina tamin'ny fivondronana antoko sasany avy amin'ny DP taloha miaraka amina karazana antoko mpankasitraka ny herisetra politika taorian'izany ilay antoko vaovao, antsoina fotsiny hoe Antoko Demokratika (DP)
Mbola misy fanantenana fa ilay Renho tsara endrika tamin'ny fahitalavitra dia hampiditra aina vao ao amin'ny DP, izay zara raha nahavita zavatra tamin'ny fifidianana natao tsy ela akory tamin'ny fiandohan'ny lohataona.
Tao anatin'ny lahatsorany mampifanditra natao ho an'i Sankei, mamaritra ny mpitarika ny Antoko Demokratika feno fanantenana Renho Murata ho toy ny ”mpiteny fahatany fotsiny”, ”tsy manan-kevitra amin'izay atao hoe firenena” izy (国というものが何だかよく分からない) ary ” i Japàna dia tsy ho an'ny vahoaka Japoney irery ihany” (日本列島は日本人だけの所有物じゃない).
Manondro mivantana ny tarazo vahiny, Taioanezy anànan'i Renho i Abiru. Mampifandray ihany koa ny Antoko Demokratika vaovao amin'ilay antoko fahiny notarihan'i Hatoyama Yukio tamin'ny voalohany i Abiru.
Nandritra ny fotoana fohy naha-praiminisitra azy tamin'ny 2009-10, lasa nalaza ratsy noho ireo hadalàna betsaka vitany i Hatoyama. Nahatezitra olona betsaka tao Japàna izy tamin'ny fivezivezeny nankany Shina mba hiala tsiny tamin'ny fitondrantenan'i Japàna nandritra ny ady, hoy i Abiru, taorian'ny nialàny tao amin'ny birao, porofon'ny tokim-panompoana nomen'i Hatoyama ho anà firenena vahiny. Hitan'ny maro toy ny tsy nahavoa tamin'ny fiatrehana ny horohorontany, tondradrano be ary ireo loza nokleary (fantatra toy ny ‘Loza Telo’) izay nanempotra an'i Japana ireo praiminisitra DPJ nifanesy, talohan'ny niterahany fifandonana teo amin'ny Shina sy ireo Nosy Senkaku izay mbola mitohy amin'izao fotoana izao.
Raha heverina ho toy ny mpitarika manan-kery i Renho, miaraka amin'ireo razambeny Taioanezy, saingy teraka ary nobeazina tao Tokyo, hoy i Abiru,” tsy afaka ny hanova velively ny endriny ny Antoko Demokratika”(民進党のイメージを思いっきり変えたい). Izany endriny izany, hoy i Abiru, dia endriky ny Antoko Demokratika mankahàla an'i Japana.
Lasa niparitaka be ny lahatsoratr'i Abiru ho an'i Sankei, miaraka aminà fanehoankevitra maro momba ny lojika miolankolak'i Abiru. Ny fitarainana iombonana dia hoe zavatra noforonin'i Abiru ilay tanisainy hoe tenin'i Renho:
Tsy niteny mihitsy i Renho hoe ”manilika an'i Japàna izy”, noho izany, maninona atao ampahany amin'ny lohateny izany? Ary raha miresaka firenena iray laroina tantaranà fivarotana tanindrazana isika, mety ho ny Antoko Demokraty Liberaly [eo amin'ny fitondràna] izay, sa tsia izany?
Betsaka fa tsy vitsy ireo mpitsikera no nitaraina nikasika ny lahatsoratra feno hakamoan'i Abiru:
(Ny tsanganan'i Abiru) dia manoatra noho ny taimbavan'olona mamo tampona, saingy heveriko fa izany no resahan'ireo antitra kaondrana amin'izao fotoana izao. Angamba mety mandeha tsara kokoa izany any amin'ireo tany mitoka-monina miaraka amin'ireo vahoaka Nippon Kaigi [fatra-pifikitra amin'ny nentin-drazana]
Raha betsaka ireo mpaneho hevitra tao amin'ny Twitter nanao fanamarihana manafintohina momba ny fiavian'i Renho, sy ny fahavononany ”hivarotra an'i Japana”, mbola manana ny mpanohana azy ihany izy.
Teraka tao Japana, miteny Japoney toy ny fitenin-dreniny, nitranga fotsiny ny fanànany ray teraka tao Taiwan. Tokony *nohazavaina* tao amin'ny lahatsoratr'i Abiru izany. Aza kivy ry Renho!
Hisy mpitantana vaovaon'ny Antoko Demokratika ho voafidy amin'ny 15 Septambra 2016.